अनौठा मानिस, जसका शरिरमा छन् रुखका हाँगा, गरियो २५ पटक अपरेसन Canada Nepal
श्रावण १७ २०७७
काठमाडौं - विश्वमा धेरै अनौठा मानिसहरु छन् । यस्तै एक यस्ता अनौठा मानिस छन्, जसको शरिर नै रुखका हाँगा जस्ता छन् । ती अनौठा मानिस बंगलादेशका हुन् । बंगलादेशका अब्दुल बजनदारको शरीरको संरचना सामान्य मानिसको भन्दा फरक छ ।
उनको शरीरमा रुखका जरा नै जरा उम्रिएका छन् । खासमा उनको शरिरमा रुखका जरा उम्रिएको होइन । उनको शरिर एक रोगका कारण विग्रिएको हो ।
रोगका कारण उनका हात र खुट्टामा रुखका हाँगा जस्ता भएका हुन् । उनले आफ्नो शरिर ठिक गर्न २५ पटक अपरेसन गरे । तर उनको त्यो समस्या हटेन ।
उनको त्यो समस्याले उनलाई रातमा सुत्न पनि गाह्रो हुन्छ । उनमा देखिएको उक्त रोगलाई डाक्टरहरुले एपिडर्मोडिसप्लासिया वेरुसीपारमिस नाम दिएका छन् । उनी आफ्नो यस्तो शरिर देखेर धेरै नै चिन्तित छन् ।
श्रावण १७, २०७७ शनिवार १४:४१:०० बजे : प्रकाशित
आइसले भरिएको बाकसमा साढे २ घण्टा बढी बसेर विश्व किर्तिमान राखे यी व्यक्तिले
एजेन्सी - विश्वमा धेरै अनौठा प्रतिभा भएका मानिसहरु छन् । धेरैले विश्वलाई नै चकित पार्ने अनौठो कार्य गरेर विश्व किर्तिमान पनि राखेका छन् । यस्तै अष्ट्रियाका एक व्यक्तिले अनौठो कार्य गरेर विश्वलाई नै चकित पारेका छन् ।
अष्ट्रियाका एक पुरुषले आइस भित्र साढे २ घण्टा बढी बसेर विश्व किर्तिमान राखेका हुन् । आइस क्युव भरिएको काँचको बाकसमा २ घण्टा ३० मिनेट ५७ सेकेन्ड बसेर नयाँ विश्व किर्तिमन राख्ने व्यक्ति कोयवर्ल हुन् ।
उनको यो कार्यले अहिले विश्व नै चकित छ । उनले पौडी खेलको कटु मात्र लगाएर आइसले भरिएको काँचको बाकसमा बसे । आइस उनको काँधसम्म आएको थियो ।
सन् २०१९ मा उनले नै राखेको किर्तिमान ३० मिनेटले तोड्न ४ सय ४० पाउन्ड आइस थपेका थिए । उनले उनले उक्त कार्य मेल्क शहरमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि देखाएका थिए ।
पत्रकारको प्रश्नमा उनले चिसोको पिडा खप्नका लागि आफुले निरन्तर सकारात्मक भावनाको परिकल्पना गरेर शरिरमा उर्जा प्रवाह गरेको बताए
आश्विन ७, २०७७ बुधवार २२:०६:१५ बजे : प्रकाशित
# विश्व किर्तिमान
सार्वजनिक यातायातमा यी व्यक्तिले ज्यूँदो सर्पलाई मास्क बनाएर हिँडेपछि ...
काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसका कारण अहिले विश्व नै त्रसित बनिरहेको छ । कोरोना संक्रमणबाट बच्न मानिसहरुले मास्क लगाउने र नियमित साबुन पानीले हात धुने, सामाजिक दुरी कायम गर्ने लगायतका उपायहरु अपनाइरहेका छन् ।
कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन विभिन्न देशमा मास्क अनिवार्य गरिएको छ । अहिले मानिसहरुले कपडा र कागजको मास्क लगाएको देखेका छौ । तर एक व्यक्तिले सर्पको मास्क लगाएका छन् ।
सुन्दा अचम्म लाग्ला, तर बेलायतको म्यानचेस्टर सहरस्थित सार्वजनिक यातायातमा एक व्यक्तिले ज्युँदो सर्पले नै मुख छोपेर मास्कको काम चलाएका छन् । अहिले उनको यो तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ ।
ती व्यक्तिले सर्पले नै नाक छोपेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा मानिसहरुले फन्नि मास्क सम्झिए तर केही छिन् पछि सर्प चल्न थालेपछि मानिसहरु अचम्म माने ।
किनकी सर्प निउँदो थियो । ती व्यक्तिले जिउँदो सर्प भिरेको खबर भाइरल भएपछि उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।
आश्विन ६, २०७७ मंगलवार २१:००:३४ बजे : प्रकाशित
# ज्यूँदो सर्पलाई मास्क
काठमाडौं - हामिले रुखमा बाँदर, लोखर्के, चितुवा चढेको देखेका र सुनेका छौं । तर के तपाइले बाख्रा रुखमा चढेको सुन्नुभएको छ । हामिलाई थाहाँ छ ? बाख्रा जमिनमा मात्र दौडन र हिड्न सक्छ ।
तपाईलाई पत्यार नलाग्ला ! तर यस्तो बाख्रा पनि हुन्छ, जुन रुखमा चढ्न सक्छ । रुखमा चढ्ने यो अनौठो बाख्राको जाति अफ्रिकी देश मोरक्कोमा पाइने गर्छ ।
यी बिशेष जातिका बाख्राले रुखमा चढेर नै फलहरु खाने गर्छन् । भोक लागेमा बाख्राहरु रुखमा चढेर भोक मेटाउने गर्छन् । तपाईलाई थाहाँ छ यो बाख्राको मल अर्थात बड्कौँला निकै महँगो हुन्छ ।
यो जातिका बाख्रा पाल्ने किसानले मल बेचेरै करोडौँ कमाउने गर्छन् । अल्जेरियाका केही क्षेत्रमा पाइने आर्गन नामको वनस्पती यी बाख्राले धेरै नै मन पराउने गर्छन् । यस वनस्पती बाख्राले खान्छन् तर बिज पचाउन सक्दैनन् ।
किसानले बाख्राको मलबाट पचाउन नसकेको उक्त बिज छुट्टाउने गर्छन् । यस बिजबाट तेल पनि निकाल्ने गरिन्छ । यसको तेल कस्मेटिक उद्योगमा महँगोमा बिक्रि हुने गर्छ ।
आश्विन ५, २०७७ सोमवार २१:४२:०० बजे : प्रकाशित
# रुखमा चढ्ने
वर्षौंदेखी हराएका बोल्न र सुन्न नसक्ने बुबा टिकटककै कारण भेटिएपछि ...
काठमाडौं । अहिले धेरैले टिकटक भिडियो बनाएर रमाइलो गर्ने गर्छन् । टिकटकमा बालबालिकादेखी उमेर पुगेका मानिसहरुलाई पनि देखिन्छन् ।
फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब भन्दा पनि अहिले टिकटकका फ्यानहरु धेरै भएका छन् । धेरै युवायुवतीहरु खाली समयमा टिकटकमा नै व्यस्त हुने गर्छन् ।
यस्तै टिकटक भिडियोले नै हराएका मानिस भेटिएका छन् । लामो समयदेखी हराएका मानिसले टिकटकले नै गर्दा आफ्नो परिवार फेला परेका छन् । यो घटना भारतको तेलंगानाको हो ।
तेलंगनाको भद्रादी कोठागुडममा बस्ने५५ वर्षका एक व्यक्ति हराए । बोल्न र सुन्न नसक्ने ती व्यक्ति पञ्जावको लुधियाना शहरमा पुगे । बोल्न र सुन्न नसक्ने हुनाले आफ्नो घर फेला पार्न सकेनन् ।
घर जाने बाटो नपाएपछि उनी फ्लाईओभर भन्दा तल अरु मानिसहरु पनि बस्ने ठाउँमा बस्न थाले । बोल्न र सुन्न नसक्ने हुनाले उनले आफ्नो बारेमा कसैलाई जानकारी गराउन सकेनन् । उनी हराएको बर्ष बित्यो । कोरोना महामारी पनि आयो ।
कोरोनाका कारण लकडाउन हुँदा उनले खानेकुरा पनि पाउन सकेनन् । उनी भोकै पनि रात बिताउन थाले । त्यसपछि एक दिन पञ्जाव पुलिसले कन्सटेबल अजैव सिंहले त्यहाँ रहेकाहरुलाई खाना खुवाउन पुगे । खाना खुवाएको भिडियो खिचे र सामाजिक सञ्जालमा राखे ।
भिडियो टिकटकमा पनि भाइरल बन्यो । टिकटक भिडियो देखेपछि गाउँका मानिसहरुले परिवारलाई खबर गरिदिए । त्यसपछि परिवारले उनलाई घर लगको भारतिय मिडियामा बताइएको छ ।
आश्विन ४, २०७७ आइतवार २२:०४:०६ बजे : प्रकाशित
महँगो सिक्का, जसको मूल्य २ करोड डलर पर्‍यो
एजेन्सी - हामिले सामान्य ठानेका केही बस्तुहरु निकै महँगा हुन्छन् । हेर्दा मूल्य नपर्ने जस्तो देखिने पुराना बस्तुहरु मूल्यवान हुने गर्छन् । यस्तै एक सिक्का निकै महँगो पर्न गएको छ । तपाईलाई पत्यार नलाग्ला, तर एक चाँदीको डलर २ करोड डलर पर्न गएको छ ।
सन् १७९४ को चाँदीको डलर सन् २०१३ मा लिलामीमा राखिएको थियो । त्यतिबेला एक करोड डलर परेको मूल्य राखिएको थियो । ब्रस मोरिलेन नामका व्यक्तिले यस सिक्कालाई सपनाको सिक्का पनि भने ।
विश्व किर्तिमान राखेको यस सिक्काको मूल्य यसअघि कुनैपनि सिक्काको मूल्य तिरिएको थिएन । ती व्यक्तिले सात वर्षपछि सिक्का विक्रीमा राख्दा मूल्य २ करोड डलर राखेका थिए । उनी महँगो सिक्का बेच्नुपर्दा दुखी पनि थिए ।
आश्विन ४, २०७७ आइतवार २१:१७:२७ बजे : प्रकाशित
# महँगो सिक्का
यी जुत्ता पोलिस गर्ने मानिस, जसले कमाउछन् महिनामै १८ लाख
काठमाडौं - मानिसहरुले जस्तो काम पनि गरिररहेका हुन्छन् । काम अनुसार पैसा पनि थारै र धेरै हुने गर्छ । भनिन्छनी काम ठुलो र सानो हुँदैन भने । यस्तै सानो कामबाट शुरु गरेमा भोली ठुलो हुँदै जान्छ ।
सानै कामबाट पनि धेरैले राम्रो कमाई गरिरहेका छन् । जुत्ता पालिस गर्ने काम हामि धेरै नै सानो मान्छौ । तर जुत्ता पालिस गरेर नै एक जनाले लाखौ कमाइरहेका छन् । तपाईलाई पत्यार नलाग्ला, तर डान वार्ड नामका एक व्यक्तिले जुत्ता पालिस गरेर नै लाखौ कमाउछन् ।
उनी अमेरिकाको मैनहट्टन शहरमा बस्ने गर्छन् । उनी पहिले फोटो स्टुडियोमा काम गर्थे । तर उनलाई यस कामले गुजारा चलाउन नै गाह्रो भयो । उनले त्यो काम छोडेर जुत्ता पालिस गर्ने काम गरे ।
जुत्ता पालिस गरिरहेका उनी अहिले आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट छन् । उनी रमाइला छन् । जुत्ता पालिस गर्ने समयमा उनले सबैलाई हसाइरहने गर्छन् । तपाईलाइृ अचम्म लाग्ला, उनले जुत्ता पालिस गरेर महिनामै १८ लाख रुपैयाँ कमाउँदै आएका छन् ।
उनी पसलमा बसेर हाँस्दै मानिसहरुलाई जुत्ता पोलिस गर्न आग्रह गर्छन् । उनले यस काम गर्दा धेरै मजा आएको र साथिहरुले गरेको देखेर आफुले यो काम गरेको बताएका छन् ।
आश्विन ३, २०७७ शनिवार २०:१५:४१ बजे : प्रकाशित
# जुत्ता पोलिस